Umzimba neminye. umzimba Ngempumelelo ukunciphisa umzimba ekhaya.
Kungenzeka ukunciphisa umzimba. Kuyinto kudingekile kuphela ukuze uyayifuna kakhulu futhi aqale ukusebenza ngokwakho. Ngokushesha Kufanele kwaziwe kodwa ukuthi ngokushesha futhi okukhulu kwesisindo ngaphandle umzamo - uyinganekwane. Ngisho ekudleni kumnandi kakhulu akakwazi izimanga ngesikhathi esifushane. Ikakhulukazi ngoba abaningi basuke contraindicated. Ngakho-ke akuyona kuwufanele ingozi, futhi kubalulekile ukuba baqonde - ngaphandle umsebenzi ayiyifezi Imiphumela ngempumelelo. neminye umzimba zihlukile. Kufanele zihlanganisa yanjalo: Ukuvivinya umzimba ngendlela, amandla ejimini, elula - umsebenzi (esisuka).
ukuzivocavoca isisindo ukulahleka ziyahamba, egijima, ebhukuda, ukudansa, ngebhayisikili. Ziklanyelwe ukuzivocavoca inhliziyo namaphaphu. Lezi umzimba ehilela amaqembu kwemisipha eziningi kanyekanye. Ngakho ukuphefumula kuba ezijulile njalo ugxile umoya-mpilo owengeziwe. Oxygen ematisa igazi, esizolokhu ke wonke umzimba, okunomsoco kwezitho nezicubu. Ukuvivinya umzimba ngendlela asiza kilojoule ngaphezulu.
ukuzivocavoca isisindo ukulahleka kufanele kwenziwe ngokulinganayo, ngaphandle ngokweqile emzimbeni. Ukuze kuzuzwe nomphumela ofiselekayo, kungcono usebenzise kanje: umsebenzi isilinganiso Kunconywa amahora amabili nesigamu ngesonto, umsebenzi omkhulu - ngehora elilodwa futhi ingxenye yesine. Lesi isikhathi udinga ukubala izinsuku 4-5.
Ukufaneleka - Jima kwesisindo
Indawo ekhethekile ugajwe ukuqina ukuqeqeshwa amandla. Uma ufisa ukuba ulahlekelwe isisindo, amandla nobungqabavu edingekayo, okungenani kabili ngesonto. Uma kungekho ithuba ukuya ejimini, kungenzeka ukwenza umzimba ngempumelelo ukunciphisa umzimba ekhaya. Ngu nekucinisa emamasela lamancane, ke iyasha eziningi kilojoule. Kuziwa ukushiswa fat. Ukuze iphimbo imisipha ingasetshenziswa njengendlela dumbbells, amabhodlela epulasitiki egcwele isihlabathi noma amanzi. Buciko push-ups,-sit-ups, kumathuluzi aphathekayo ayokhonza njengamakhosi izakhi yezinkinga.
Welulekela - umzimba for kwesisindo
Esinye isici esibaluleke kakhulu ukuqina ngilulekela (esisuka). Kufanele kwenziwe emva amandla ambalwa noma ukuzivocavoca. Welulekela usizo silondoloze imisipha kuyaqina. Ngaphezu kwalokho, imisipha ngokusebenzisa esisuka, zilulame ngokushesha ngemva kokuzivivinya, ningahlunguphazi.
izimpawu Nweba ziwusizo ngisho ngaphandle ukuqeqeshwa amandla ukuqeqeshwa aerobics. Kufanele prodelyvat katsatfu ngeliviki. Kodwa okokuqala kunconywa ukwenza umzimba ezimbalwa ezilula ukuxoxa imisipha. Ngenxa yalesi kufanelekile, ngisho uhamba endaweni. Lezi manipulations ibe nomthelela ekubeni ukuzinza isisindo, umzimba uthola ukwazi ukuzivumelanisa nezimo.
Noma yimuphi umsebenzi ngokomzimba is best kwenziwa amahora amabili ngemva kokudla amahora amabili ngaphambi sokulala. Kubalulekile kakhulu yokugqugquzela ukuzivocavoca, isimo sengqondo ecacile ukunciphisa umzimba. Ukuze umsebenzi wahamba "ukuze okuhle", kufanele ziyenze ngenjabulo, bekholelwa ngokuqinile ukuthi injongo ushintsho sibalo surely ingafinyelelwa.
Isimo esibaluleke kakhulu ukuze ukusebenza kwe ekhaya umsebenzi yiyona ukuchayeka emoyeni, ukudla ukudla okunomsoco (kufaka, izithelo, imifino). Inani engayitholi fat, imikhiqizo ebhikawozi baye kakhulu kwehle. Ukudla kwasekuseni kumelwe. isethi Daily imikhiqizo kumele kube ukukhanya, ecebile ukudla isitshalo. Ezokudla akufanele kube umhla ngehora lesithupha kusihlwa. Dinner futhi kufanele kube ukukhanya, umzimba udinga ukuphumula futhi alulame okumatasa kwansuku zonke. Kuyasiza ukuhlela kanye ngosuku isonto ukudla.
Ngokulandela lezi ziqondiso ezilula, imizamo ngeke uhambe ngeze. Yokugcina yi omuhle akuyona eside ukulinda. Ingakapheli inyanga - isigamu sibalo uzothola ngokuvumelana, qondanisa esikhumbeni, imisipha babe nokunwebeka. Ngaphezu kwakho konke, wena ngaphandle futhi ngaphakathi uvuseleleke eminyakeni embalwa.
Nini futhi kanjani sihlanganyele emidlalweni
Tonus club: izibuyekezo zamakhasimende!
Izinhlobo squats ngoba glutes
Iseluleko sendlela ekhiphela up imilenze ekhaya intombazane
Izivivinyo eliphumelela kakhulu eziyihaba abapristi
Push-ups ngezibhakela - ngayo Wabasaqalayo abasubathi?
Nezimfumbe mayelana lily we esigodini izingane kanye nabantu abadala
Okuthile ngokuzumayo kushintshe impilo, noma ukuthi yini ukukhanya kwephupho
Crocus ebhodweni: indlela yokunakekela futhi ikhule
Yini ukutshela socionics Huxley, intombazane noma umuntu?
Izilwane iRed Encwadi endaweni Samara: incazelo kanye nezithombe
Traditional-Cuban ukudla: izitsha kanye zokupheka
Heat izibhamu Local. Heat isibhamu: manual, intengo kanye nokubuyekeza
Encephalopathy Diabetic: izimpawu, izimpawu, nokwelashwa izici
Vietnam iholide, ukubuyekezwa kanye nemigqondo kuleli zwe elihle
Ubuciko bokulungiswa kwanamuhla: ama-adhesives for linoleum
I-jelly elimnandi kusuka kukhilimu omuncu nge-gelatin: izindlela zokupheka ezinhle, izici zokupheka nokubuyekeza
Dala logo clan - kunendaba?